China Tungsten carbide tamping tine na-eji n'ọnụ iyi akụkụ maka Railway Industry emepụta na suppliers | Zhongfu Cemented
Tungsten carbide tamping tine na-eji n'ọnụ iyi akụkụ maka ụlọ ọrụ ụgbọ oloko
tamping tines maka ụgbọ oloko
maka okporo ụzọ ụgbọ oloko
Nwa ọla ọcha
Tungsten carbide tamping tins
ahaziri ma ọ bụ ọkọlọtọ
Tungsten carbide tamping ngwá ọrụ, tamping pick
Enwere ọtụtụ oghere dị warara n'elu eze ka ọ na-etolite n'ọnụ ọnụ, a na-eji ngwá ọrụ na-emepụta ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dịka ụkpụrụ nke nkwụsị nke helical gia. N'oge nhazi, ngwá ọrụ ahụ na-ebipụ ezigbo ibe dị ka ajị agba site na nha nha nha nke ngwa ahụ, ya mere a na-akpọ ya onye na-akpụ afụ ọnụ. A na-eji ndị na-akpụ afụ ọnụ emecha ezé gia mgbe ihicha ihe na ịkpụzi ngwa (lee nhazi gia). Ihe na-egbutu gia dị ka diski a na-ejikarị eme ihe dị ka ngwa cylindrical cylindrical siri ike (Foto 1). Oghere dị n'elu eze nwere ụdị abụọ: otu bụ na a na-emepe oghere okirikiri ma ọ bụ gburugburu na mgbanaka gia dum. Akụkụ obe nke uzo nwere ike ịbụ akụkụ anọ ma ọ bụ trapezoidal. Onye na-akpụ afụ ọnụ a na-amụcha ihu ihu (oghere) mgbe ọ kwuchara. Ọ dị mma maka ịkpụ ndị na-akpụ akpụ na modulu na-erughị 1.75 mm; nke ọzọ bụ na oghere ndị dị n'akụkụ abụọ ahụ enweghị ike ịgafe, bụ nke a na-etinye iche iche na ntinye nke nwere ụdị mbo. Iji mee ka ntinye nwere ike ịdọrọ mma ahụ, a na-etinye ya na mgbọrọgwụ nke ezé ọ bụla. Gwuo oghere ndị nwere nkụja. Mgbe ụdị ịkpụcha ntutu dị otú a na-ada ụda, ọ kwesịrị ịkwagharị profaịlụ eze na elu cylindrical nke eze n'elu.
Nchụso anyị na ebumnuche ụlọ ọrụ bụ mgbe niile ka “na-egbo mkpa ndị ahịa anyị mgbe niile”. Anyị na-aga n'ihu inweta na ịke na chepụta ngwaahịa dị elu dị ịrịba ama maka onye ọ bụla bụ ndị ahịa anyị ochie na ndị ahịa ọhụrụ wee nweta atụmanya mmeri maka ndị na-azụ ahịa yana anyị maka imepụta pụrụ iche maka China Guangdong Dongguan High Precision Core Fanye Tungsten Carbide Mold Parts , Anyị na-erube isi na tenet nke "Services of Standardization, izute ahịa 'Achọrọ".
Pụrụ iche Design maka China Tungsten Carbide Mold, nkenke isi ntinye, ụlọ ọrụ anyị na-esetịpụ ọtụtụ ngalaba, gụnyere ngalaba mmepụta, ngalaba ahịa, ngalaba njikwa mma na ụlọ ọrụ, wdg. naanị maka imezu ngwaahịa dị mma iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ, enyochala ngwa ahịa anyị niile tupu ebupu ya. Anyị na-eche mgbe niile banyere ajụjụ n'akụkụ nke ndị ahịa, n'ihi na ị na-emeri, anyị meriri!
Our ngwaahịa na ngwọta na-ukwuu ghọtara na ntụkwasị obi site ahịa na nwere ike mezuo mgbe niile na-agbanwe ego na ọha na eze na-achọ maka Best Price on China Tungsten Carbide Akara mgbanaka / Carbide Parts, We're ready to cooperate with enterprise ezi enyi si n'ụlọ gị na esenidụt na mee ọmarịcha ogologo oge ọnụ.
Best Price on China Cap Tips, Carbide Rings, E wezụga ike oru ike, anyị na-ewebata elu ngwá maka nnyocha na-eduzi nlezianya management. Ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ anyị na-anabata ndị enyi ma n'ụlọ na mba ọzọ ka ha bịa maka nleta na azụmahịa na ndabere nke nha anya na uru otu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe anyị ọ bụla, cheta na ị nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkwupụta okwu na nkọwa ngwaahịa.
Dureza Del Titanio, Carbide Punch ma nwụọ, Tungsten Carbide Vs Carbide, Nkọwapụta Cnc Machining China, Akụkụ omenala & eyi, Akụkụ Carbide Yiri,